Waraaqaha Casuumadaha oo la bilaabay qaybintooda si rasmi ah.
Somalitalk 10 October 2002
xalay ayaa rasmiyan loo bilaabay qaybinta waraaqaha casuumadaha ee shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed oo 15ka October lagu qaban doono magaalada Eldoret oo 320km dhanka galbeedka kaga taala magaalada Nairobi. [ELDORET WAA MAGAALO SIDEE AH]
horay waxaa qorshuhu ahaa in dadka kasoo qayb galaya shirka guud ahaan ay noqdaan 300 oo ergo hase yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in tirada la kordhiyo kadib markii qaar kamid ah kooxaha soomaalida ay saluugeen tirada lagudoonsiiyay.
Baaqii ay soo saareen hogaamiya kooxeedyada soomaaliyeed ayaa siyaasiyiin keenyaan ah ay ka xumaadeen iyagoo sheegay in loo baahanyahay isu tanaazul iyo in wax walba laga hor mariyo danta guud ee soomaalida.
waxaana la filayaa in maalmaha soo socda lasoo daad gureeyo ergooyinka ka qaybgalaya shirka Eldoret ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya.
SOMALITALK | Oct 10, 2002
shir aad u balaarnaa oo looga hadlayay dhamaan qaybaha uu ka kooban yahay sportiga Somalida ee Norway.GUJI